Sidee loo Maamulaa Sigaar Cabista iyo Tubaakada - 802Quits
Bogga ugu weyn » Vermonters » JOOJISO » Sida loo maareeyo Jaceylka
SIDEE LOO MAAMULAA CARRUURTA
Intee in le'eg ayuu joojinta nikotiintu soconayaa? Labada toddobaad ee ugu horreeya ayaa ugu adag. U diyaar garowga inaad uga gudubto adoo adeegsanaya qorshahaaga joojinta ee khaaska ah, caawimaadda dhakhtarkaaga, taageero dheeraad ah oo taleefanka 802Quits ama shaqsi ahaan ah 'Quit Coach' iyo shabakaddaada taageerada ayaa fure u noqon doonta guushaada. Khibrad kasta oo joojis ah waxay dareemeysaa mid ka duwan; way ku adkaan doontaa dadka qaar dadka kale. Haddii aad isku dayday hal dariiqo oo hore oo ay kuu shaqeyn weyday, tixgeli inaad isku daydo mid kale. Isku day kasta wuxuu ku dhismayaa waxaad soo baratay wuxuuna kuu soo dhowaanayaa guusha.
Sideed uga fal celin doontaa taariikhda joojintaada? Miyaad ka boodi doontaa sariirta, adigoo xiiseynaya inaad bilowdo noloshaada cusub ee aan tubaakada lahayn? Mise waxaad ku hoos qarsan doontaa daboolka adiga oo rajaynaya in fikradda ah joojintu ay riyo uun ahayd? Si kastaba ha noqotee, ku faan in aad ogtahay in marka aad soo kacdo Maalintaada Joojinta, aad hadda si rasmi ah uga madaxbannaan tahay tubaakada.
Waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso sida looga joojiyo sigaar cabista sigaarka iyo waxyaabaha kale ee tubaakada laga sameeyo. Halkan waxaa ku yaal tilmaamo ku saabsan maareynta sigaarka iyo sigaarka elektaroonigga ah iyo damaca kale ee tubaakada.
Maalintaada Joojinta, waxaad u baahan doontaa inaad sameyso baaritaan deg deg ah si aad u hubiso in tubaakadaada oo dhan ay dhammaatay. Markaa, ku bilow maalintaada adoo dul maraya sababaha aad u joojisay. Fikrad kale oo fiican ayaa ah in la isku daro "boorsada walaaca walaaca." Dhexdeeda, waxaad ku ridi kartaa nacnac adag, mints, caws ama cabbitaannada qaxwada, kubbadda walaaca ama wax kale oo aad ku mashquuliso gacmahaaga, sawir qof aad jeceshahay ama xayawaan rabaayad ah ama warqad ka timi ilmo ama naftaada oo kaa celisa inaad sii socoto markasta oo aad damacyadaas hesho.
Ka fikir meelaha aad sida caadiga ah u cabto, u calaalisid ama ubaxaysid. Haddii aad ka fogaan karto iyaga markii aad joojiso, waxay kaa caawin doontaa inaad kaa ilaaliso inaad jirrabto oo kaa caawiso maaraynta sigaarka, sigaarka elektarooniga ah ama damacyada kale ee tubaakada.
Waxa ugu muhiimsan ee la sameeyo waa in la fuliyo qorshayaashii aad u samaysay maanta, maalinta ku xigta iyo inta aad u baahan tahay illaa inta rabitaanka tubaakada aad u fududahay in la maareeyo. Waad ogtahay waqtiyada iyo xaaladaha kaa dhigi doona inaad rabto inaad isticmaasho tubaakada, laakiin hadda wixii ka dambeeya waxaad ku dhejin kartaa qorshahaaga joojinta loogu talagalay si aad uga gudubto waqtiyadaas. Inkasta oo aad dareentid fiicnaan-neefsasho fudud iyo tamar badan-waxay dhici doontaa maalmo gudahood, waxay qaadan kartaa illaa lix bilood inaad dareento tubaako-la'aan. Xaqiiqdii, ka-madax-bannaanida tubaakada lix bilood waa tallaabo muhiim u ah joojinta joojinta.
Xeeladaha wax qabadku waa waxyaabo aad sameyn karto oo kaa caawinaya inaad maareyso damacyada. Ma jirto wado lagu sii ogaan karo waqtiga ka hor kaas oo adiga kuu shaqeyn doona, sidaa darteed waxaa ugu wanaagsan in la helo xulashooyin badan. Waxaad ogaan kartaa in qaarkood ay uga shaqeeyaan si ka wanaagsan kuwa kale xaaladaha qaarkood. Sida kaliya ee lagu ogaan karo hubaal waa in la tijaabiyo.
Waxaa jira saddex sharci oo fudud oo la raaco marka la xulanayo xeeladaha waxqabadka:
1.Waa inay fududahay in la sameeyo. Sida ugu fudud ee ay tahay, ayey u badan tahay inaad sameyn doontid.
2.Waa inay noqotaa wax wacan. Haddii aysan fiicnayn, fursadaha ayaa ah inaadan rabin inaad sameyso!
3.Ficilka aad dooratid waa inuu joojiyaa ama ugu yaraan yareyaa rabitaankaaga. Haddii aysan hoos u dhigayn hamigaaga sigaar ama sigaar elektaroonig ah, tubaakada la ruugo, buuriga lagu shiido ama vape, waxaad u baahan tahay inaad heshid wax kale oo kaa caawin doona.
Tusaalooyinka xeeladaha waxqabadka ee la isku dayo:
Ku celceli 4Ds. Qaado neef qoto dheer ama 2. CAB koob biyo ah. Wax kale samee. Dib u dhig 10 daqiiqo.
La xiriir kuwa kale ee sigaar joojinta ah ee og waxa aad ku socoto.
Isku mashquul naftaada illaa hamigu ka gudbo. Damaca badankood wuxuu socdaa kaliya 3-5 daqiiqo. Maxaad ku raaxeysaneysaa muddadaas? Ka fikirida lacagta aad keydsato iyo waxaad iibsan karto? Lugeyneyso? Daawashada fiidiyowga YouTube-ka ee aad jeceshahay? Hoos ka eeg fikradaha dheeraadka ah.
Haddii aad ka gudbi karto naftaas nikotiinta ka noqoshada rabitaankeeda adoo mashquulinaya naftaada, waxaad hal talaabo u dhowdahay inaad gaarto hadafkaaga. Markaad ka fikirto inaad joojiso inaad ahaato hal guul 5-daqiiqo markiiba, waxay dareemi kartaa wax yar oo fudfudud oo lagu fuliyo.
Tirtir fariimahaagii hore ama cusbooneysii buugga cinwaanka taleefankaaga.
Ka tirtir emayllada hore kombiyuutarkaaga ama taleefankaaga.
Shaatigaaga ama kabahaaga beddel. Ficilkan yar wuxuu kaa caawin karaa inaad dib u dejiso oo aad fiicnaato.
Sita kubbadda ping pong iyo xarig caag ah. Waxay u egtahay doqon, laakiin isku dayga inaad ku duubto caaggaas caarada kubbadda ping pong ma fududa sida ay u muuqato, waxayna kugu mashquulineysaa illaa hammuun dhaafto.
Lug ku mari dabaqa ama dhismaha haddii aad shaqada ku jirto — uga fikir inuu yahay nasasho aan sigaar lagu cabin.
Gaadhiga u qaado meesha baabuurka lagu dhaqo ama ku nadiifi gudaha.
Caday oo nadiifi ilkahaaga. Waxay kaa caawin doontaa inaad maskaxdaada ka saarto hamiga, adiguna waxaad yeelan doontaa neef cusub!
Ka fikir ugu yaraan 5 heesood oo ay ku jiraan magacyada dadka.
Qaado nasasho abuur gabbaldayaha gabbaldayaha-ka shaqeynta madaafiicdaas waxay noqon kartaa caqabad iyo hab caafimaad oo aad ku qaadato 5 daqiiqo.
Fiiq liinta xitaa haddii aadan dareemayn inaad cunayso. Waxay qaadataa 5 daqiiqo oo kaliya in dhamaan waxyaabahaas cad lagala baxo.
Markuu wax damco ku dhaco, aad musqusha, dhaq gacmahaaga iskuna eeg muraayadda. Waqtiga aad diyaar u tahay nasashada sigaarka, hammuunku wuu dhammaaday.
Ku ciyaar kubad jeedin ama dhagax walwal ah si aad gacmahaaga mashquul ugu noqoto intaad ka shaqeyneyso hamiga.
Si dhakhso leh u soco oo tirin tallaabooyinkaaga intaad socoto, oo bal arag haddii aad wax yar ka badan samayn karto maalin kasta.
Nadiifi guriga dhexdiisa ama wax ka qabato armaajo. Gunno: sigaar la'aan iyo guri cusub, guri la'aan.
Ciyaar keligaa ama ciyaar kale haddii aad kombiyuutar joogto, laakiin maahan haddii goobtaada shaqada aysan u oggolaanayn!
Ku celceli 4Ds reat Neefsasho KHATAR AH. CAB koob biyo ah. Wax kale samee. Dib u dhig 10 daqiiqo.
Si aad ula soo baxdid liistadaada waxyaabaha kaa mashquulinaya iyo talooyinka lagu maareeyo damacyada, ka fikir waqtiyada maalinta aad sigaarka ama sigaarka elektaroonigga ah aad cunayso, tubaakada aad calaaliso, buunshaha ama aad uboorto inta ugu badan isla markaana aad isbarbar dhigto talo. Tusaale ahaan, haddii aad had iyo jeer gaariga ku iftiimiso, beddel idaacadda oo la hees heesta. Heesaha badankood waa saddex illaa shan daqiiqo. Markaad dhamayso, hamigaagu waa inuu kaa baxo.